Shilalekha » अधुरै तीनकुने पुल, कहिले होला सम्पन्न ? अधुरै तीनकुने पुल, कहिले होला सम्पन्न ? – Shilalekha
२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार १७:५२
काठमाडौं । तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल नयाँ ठेक्कामार्फत निर्माण गरिने भनीए पनि लामो समयदेखि निर्माण प्रक्रिया अघाडि बढाइएको छैन ।
निर्माण शुरु भएको लामो समयसम्म पनि निर्माण कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्सन प्रालीले काम सम्पन्न गर्न नसक्दा गत वर्ष सडक विभागले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । पुरानो ठेक्का तोडिए पनि नयाँ ठेक्कामा जान बाँकी रहेको काठमाडौँ उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।
कार्यसम्पादन जमानतमार्फत राखिने पाँच प्रतिशत रकम सरकारको खातामा फिर्ता ल्याइएको उनले बताए । काम गर्न आवश्यक रकम पेश्की ९मोबाइलाइजेसन० पहिले कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएकामा त्यो पनि फिर्ता भइसकेको अधिकारीले बताए ।
आयोजनाले विसं २०७१ मा नै सो पुलसँगै बिजुलीबजारस्थित धोबीखोला पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । मुख्य सडकका दायाँबायाँ दुईरदुई पुल निर्माण गर्न एउटै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।